Shir muhiim ah oo madaxtooyada uga socda madaxda sare ee dowladda federaalka ah kadib markii shalay galab ciidamadooda looga xoog roonaaday qeybo ka mid ah magaalada Muqdisho. Ruunkinet 19/02/08
Warar ku dhow madaxtooyada Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ayaa ku waramaya shir deg deg ah uga billowday xalay xarunta madaxtooyada Villa Soomaliya ee magaalada Muqdishu mas'uuliin sare oo ka tirsan dowladda federaalka ah ee Soomaliya, mas'uulinta gobolka Banaadir iyo taliyaasha ciidamada dowladda oo ay ka mid yihiin boliiska iyo nabadsugidda.
Shirkan oo ka damabeeyay dagaal shalay gabnimadii ay maleeshiyada muqaawimda ay uga xoog roonaadeen ciidamada dowladda qeybo ka tirsan magalada Muqdisho gaar ahaa agagaarka Hotel Daamey iyo guriga Aadan Caadde ayaa la sheegayaa in uu war deg deg ah ka soo baxayo dhawaan xukuumadda.
Waraka ayaa intaasi ku daraya in shirkaasi ay ka qeyb qaleen saraakiil sare oo ka tirsan ciidamada Itoobiya.
Warar aan la xaqiijin ayaa u waramaya in shirkaasi uu ka soo bixi doono dagaal aad u weyn oo ciidamada dowladda iyo kuwa Itoobiyaanka ay ku qaadaan Suuqa weyn ee Bakaaraha muddo dhow si ay ula wareegaan gadan ku haynta suuqa bakaaraha ama in ay gebi ahaanba bur buriyaan suuqaasi.